निर्बन्ध नायिकाको प्रस्थान- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
निर्बन्ध नायिकाको प्रस्थान
वानीराको जीवनको वास्तविक ऊर्जा र शक्ति एउटै विश्वासमा अडिएको थियो, ‘झन्डा उचालेर, डन्डा खाएर मलाई कहीँ पुग्नु छैन ।’
जेष्ठ २२, २०७८ ज्ञानु पाण्डे
सम्बन्धहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट सम्बन्ध हो आत्मीयताको सम्बन्ध ! सबैभन्दा सुन्दर सम्बन्ध हो स्वेच्छाको सम्बन्ध । करको, दबाबको, बाध्यताको सम्बन्धभन्दा कता हो कता उपल्लोकोटिको सम्बन्ध हो श्रद्धाको सम्बन्ध ! आदरयुक्त प्रेमको सम्बन्ध । डा. वानीरा गिरि (विसं २००३–२०७८) सितको मेरो सम्बन्ध यही प्रकृतिको हो ।
उहाँलाई म ‘वानीरा दिदी’ को सम्बोधन गर्थें । उहाँबाट मैले सधैं आत्मीय, निकटस्थ र स्नेहिल व्यवहार पाएँ । भन्नेहरू भन्थे– ‘वानीरा घमण्डी छ, ऊ हत्तपत्त कसैलाई समय दिन्न ।’ तर, मेरो अनुभवमा उहाँ कहिल्यै ‘घमण्डी’ लाग्नुभएन । सायद एउटै कलेज पढाउने भएर हो, उहाँलाई देख्न–भेट्न पाउनु, गफ्फिन पाउनु, विचार–अनुभव सुन्न पाउनुजस्ता अवसरको उपलब्धता सधैं सहज थियो मलाई । कतिपय लेखक (खासगरी समकालीन) ले ‘कडा स्वभावकी महिला’ भनेर उहाँको कुरा काट्ने गरेको नसुनिएको होइन, तर मलाई भने उहाँ ‘कडा’ कहिल्यै लाग्नुभएन । हो, उहाँ स्पष्टवक्ता हुनुहुन्थ्यो । आफूलाई चित्त नबुझेको विषय मनमा दबाएर राख्नुहुन्नथ्यो, फ्याट्टै बोल्दिहाल्नुहुन्थ्यो । त्यो स्वभाव सायद धेरैलाई बिझाउँथ्यो, तर मलाई भने त्यही स्वभाव सबैभन्दा बढी मन पर्थ्यो ।
कलेजमा मेरा समवयी साथीहरू, जो आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा तत्काल भनिहाल्ने स्वभावका देखिन्थे, तिनलाई म ‘वानीरा दिदी ब्रान्ड’ भनेर जिस्क्याउँथेँ । त्यस्तो स्वभाव राख्ने मित्रहरूलाई अझै पनि त्यही नामले जिस्क्याउँछु । यद्यपि भौतिक रूपमा वानीरा दिदी अब कतै भेटिनुहुन्न, तर सम्झनामा उहाँको छाप अझै ज्युँका त्युँ छ ।
वानीरा दिदीलाई सुरुमा मैले पद्मकन्या क्याम्पसमा गुरुआमाको रूपमा देखेकी/चिनेकी हुँ । विद्यालयस्तरको पढाइ सकिएपछि उच्चशिक्षा अध्ययनको क्रममा म पद्मकन्या भर्ना भएँ । लगातार चार वर्षसम्म विद्यार्थीका रूपमा त्यहाँ रहँदा जति पनि गुरु–गुरुआमालाई देख्ने–चिन्ने अवसर पाएँ, तीमध्ये वानीरा गिरि अलि बेग्लै प्रभावको लाग्नुभएको हो मलाई । उहाँको बोल्ने ट्युनदेखि हिँड्ने शैली अनि लबाइ–सजाइ अरू गुरुआमाको भन्दा अलग्गको लाग्थ्यो । बोलीपिच्छे ‘होइन हौ बहिनीहरू’ भन्नुहुन्थ्यो । सम्झन्छु– त्योबेला हामी साथी–साथी कुरा गर्दा पनि उहाँको दार्जिलिङे ट्युनको खुब नक्कल गर्थ्यौं र हास्थ्यौं बेस्सरी । उहाँ नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो, तर अंग्रेजी पनि फरर्र बोल्नुहुन्थ्यो । सधैं हतारोमा झैं देखिनुहुने उहाँ निकै स्मार्ट गुरुआमा हुनुहुन्थ्यो ।
निकै फरासिली, हक्की, वाचाल अनि अलिअलि विद्रोही स्वभावकी लाग्ने उहाँबारे हाम्रो धारणा थियो– ‘वानीरा दिदीले नजानेको केही पनि छैन ।’ अझै सम्झना छ– कक्षामा पढाउँदा उहाँ पाठ्यपुस्तकभन्दा परपरसम्मका विषय उप्काउनुहुन्थ्यो । विदेशी लेखकका कुरा गर्नुहुन्थ्यो । कैयौं विदेशी कविका कविता उहाँलाई कण्ठ आउँथ्यो । अंग्रेजी कविका कविता अंग्रेजीमै सुनाउनुहुन्थ्यो, हिन्दी कविका कविता हिन्दीमै सुनाउनुहुन्थ्यो । मलाई असाध्यै रोचक लाग्थ्यो, उहाँको कक्षामा पढ्न !
वानीरा गिरिको साहित्यिक व्यक्तित्वसितचाहिँ म विश्वविद्यालयमा पढ्न थालेपछि मात्रै परिचित भएकी हुँ । कविताको कक्षामा सन्दर्भमा गुरुले उहाँको पनि नाम उच्चारण गरेको सुनेपछि नै हो, वानीरा दिदीको साहित्यिक व्यक्तित्वबारे पहिलोचोटि मेरो ध्यानाकर्षण भएको । त्यसपछि नै हो मैले विशेष हेक्काका साथ उहाँ साहित्यिक रचना खोजीखोजी पढ्न सुरु गरेको । एमएको थेसिस उहाँकै विषयमा गरेकी हुँ मैले । यो २०३९ सालको कुरा हो । त्योबेला कविता र उपन्यास विधामा गरी वानीरा दिदीका जम्मा तीनवटा कृति मात्रै प्रकाशित थिए ।
नेपाली समाजमा साहित्यमा कलम चलाउने नारीहरू त्यतिबेला अहिले जति धेरै संख्यामा थिएनन् । अझ त्यसमा पनि आधुनिकताको चेतसहित, प्रयोगवादी धाराको प्रभाव ग्रहण गर्दै अस्मिताबोधी स्वरका साथ कलम चलाउने सामर्थ्य भएका नारी प्रतिभाको संख्या ज्यादै थोरै थियो । त्यही संख्याभित्र वानीरा गिरि एक उल्लेख्य नाम हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँको साहित्यमा शोध गर्ने निधो गरी विभागमा प्रस्ताव गरें, विभागले स्वीकृत गर्‍यो । कलेज पढ्दै आफूलाई विशेष छाप परेको गुरुआमामाथि एमएको थेसिस गर्न पाउनुले मेरो मन खुसीले गद्गद् थियो । अर्को खुसी, डा. वासुदेव त्रिपाठी सर मेरो शोध निर्देशक हुनुभयो । उहाँकै निर्देशनअनुसार, शोधसमाग्री जुटाउने सिलसिलामा म प्रथमतः शोधनायक साहित्यकार वानीरालाई भेट्न गएँ पद्मकन्या कलेजमा । उहाँले खुसी हुँदै क्याम्पसमै अरू गुरु–गुरुआमाका अगाडि ‘मेरी विद्यार्थी’ भनेर अँगालो हाल्दा मेरो खुसीको सीमा रहेन ।
वास्तवमा त्यही घटनादेखि हो, वानीरा दिदीसितको मेरो सम्बन्ध दुईतर्फी आत्मीयताको आयाममा उक्लिएको । अध्ययनका लागि उहाँको घरको पुस्तकालय मेरा लागि खुला भयो । अधिकांश सामग्री त्यहीँबाट जुट्यो । शोधकार्य–क्रममा उहाँसित लामो अन्तर्वार्ता लिएँ, उहाँको व्यक्तिगत जीवनका अनेक पक्ष–पाटाहरूबारे पनि जानेँ–बुझेँ ।
७ वर्षको उमेरमै मातृविहीन वानीरामा सानै उमेरबाट साहित्यप्रति आकर्षण उद्बोधित भएको हो रहेछ । डीके खालिङद्वारा सम्पादित दार्जिलिङबाट निस्किने नेपाली पत्रिका ‘दियो’ (वर्ष ८, अंक ९) मा २०२० सालमा ‘मेरो साथी भन्छ’ शीर्षक कविता छपाएर उहाँ नेपाली साहित्यमा औपचारिक प्रवेश गर्नुभएको थियो । वानीराको साहित्यिक यात्राले खास गति समाउन सुरु गरेको चाहिँ उहाँ नेपाल भित्रिएपछि नै हो ।
२०२२ सालमा जसै उहाँलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा महेन्द्र छात्रवृत्तिअन्तर्गत एमए पढ्न अवसर प्राप्त भयो, त्यसैले नेपालमा बस्ने संजोग पनि जुरायो । एमए–विद्यार्थी छँदै २०२३ सालमा जनकपुर निवासी इन्जिनियर शंकर गिरिसित वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएपछि उहाँ कानुनतः यतैको बासिन्दा हुनुभयो । एमएको पढाइ सकिनेबित्तिकै २०२५ सालदेखि उहाँले पद्मकन्या कलेज पढाउन सुरु गर्नुभएको हो । र, खासमा त्यही समयदेखि नै साहित्यिक वृत्तमा उहाँको नामले चर्चा पाउन सुरु गरेको हो ।
वानीरा गिरिको साहित्य–यात्राको पृष्ठभूमि पारिजातसित धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ । पारिजातझैं वानीरा गिरिको जन्मघर पनि भारत हो । दुवै लेखकले आफ्नै रोजाइमा नेपाललाई कर्मथलो बनाए । दुवैका पिता चाहन्थे– छोरी चिकित्साशास्त्र पढोस्, डाक्टर बनोस् ! तर, दुवैले त्यो लाइन समाएनन्, साहित्यमा आए । अध्ययन र उच्च प्रतिभाको बलमा दुवैले नेपाली साहित्यमा आफ्नो नामलाई विशिष्ट कोटीमा स्थापित गरे । आधुनिक नेपाली साहित्यमा पारिजात र वानीरा गिरिको नाम शीर्षस्थ नारी हस्ताक्षरको रूपमा सुपरिचित छ ।
यद्यपि वानीरा दिदी आफूलाई कुनै लेखकसित तुलना गरेर मूल्यांकन गरेको रुचाउनुहुन्नथ्यो । ‘म मै हुँ, अरू कसैसित मेरो तुलना गर्नु जरुरी छैन’ भन्नेजस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो । त्यस्तै व्यवहारले कतिपयले उहाँलाई ‘अहंकारी’ को रूपमा बुझेका हुन सक्छन् । तर, त्यो त उहाँको स्वभाव थियो, जसबाट उहाँ पन्छिन चाहनुभएन । आफ्नो अलग्गै स्वभावले पनि लेखन–वृत्तमा वानीरा अलग्गैसित चिनिने नाम बन्नुभएको थियो । तर, त्यतिले मात्रै उहाँ फरक पहिचानको लेखक बन्नुभएको पक्कै होइन । वानीरा गिरिलाई वानीरा गिरि बनाउने पहिलो र अन्तिम महत्त्वपूर्ण शक्ति भनेको उहाँमा अन्तर्निहित विशिष्ट किसमको सिर्जनशील क्षमता नै हो । विश्वसाहित्य अध्ययनमा (पनि) गहिरो रुचि राख्ने, हरेक विषयमाथि भिन्न किसिमले सोच्न सक्ने, उसरी नै लेख्न खोज्ने/लेख्न सक्ने, प्रचुर कला–सामर्थ्य भएको एक अत्यन्त सशक्त हस्ताक्षर हो– वानीरा ।
वानीराको कलमबाट नेपाली साहित्यले कविता, उपन्यास, निबन्ध, नियात्रालगायत विधामा एक से एक ओजिला कृति प्राप्त गरेको छ ।‘एउटा एउटा जिउँदो जंगबहादुर’, ‘जीवन थाय्मरु’, ‘काठमाडौं काठमाडौं’, ‘मेरो आविष्कार’, ‘कारागार’, ‘निर्बन्ध’, ‘शब्दातीत शान्तनु’, ‘पर्वतको अर्को नाम पार्वती’, ‘जंगल जंगल’, ‘रोकिनेले आकार दिन सक्तैन’, ‘द प्रिजन’, ‘फ्रम द लेक, लभ’, ‘फ्रम द अदर एन्ड’, ‘माई डिस्कभरी’ लगायत उहाँका किताब नेपाली साहित्यको अमूल्य धन हुन् ।
नेपाली साहित्यमा वानीराको योगदान साहित्यिक कृतिको सिर्जनामा मात्रै सीमित छैन, नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्‍याउन पनि उहाँको सक्रियता महत्त्वपूर्ण थियो । विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साहित्यिक सभा–गोष्ठीमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर विश्वका अन्य भाषाका लेखक विद्वान्समक्ष उहाँले नेपाली भाषा–साहित्यलाई चिनाउनुभएको छ । एउटा उदाहरण, सन् १९७६ मा तत्कालीन सोभियत संघमा सम्पन्न भएको युवा अफ्रो–एसियन लेखक सम्मेनलमा उहाँले नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । स्मरणीय छ, यस उचाइको सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने उहाँ प्रथम नेपाली नारी स्रष्टा हुनुहुन्छ, जहाँ त्यसभन्दा १८ वर्षअघि महाकवि देवकोटाले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २०२२ सालमा पहिलो पटक आयोजना गरेको कविता महोत्सवमा भाग लिई पुरस्कृत वानीरा गिरि साझा पुरस्कार पाउनेको सूचीमा पनि प्रथम नारी–लेखकमा गनिनुहुन्छ । २०७१ सालमा ‘विश्व नारी रत्न सम्मान’ बाट सम्मानित हुनुभएको उहाँ नेपाली साहित्यमा विद्यावारिधि गर्ने प्रथम नारी व्यक्तित्वको रूपमा पनि सुप्रसिद्ध हुनुहुन्छ । देशभित्रका सभा–समारोहमा उतिविधि सहभागी नहुने, सिर्जनामै एकोहोरो लागिरहन रमाउने उहाँले आफ्नो साहित्यिक जीवनमा प्रशस्त संख्यामा पाठक पाउनुभयो । वास्तवमा धेरै संख्यामा पाठक कमाउनु कुनै स्रष्टाका लागि जीवनकै ठूलो कमाइ हो, सम्मान र पुरस्कार हो !
वानीराको विचार थियो– ‘झन्डा उचालेर, डन्डा खाएर मलाई कहीँ पुग्नु छैन, कविहरूले जे सत्य छ त्यही बोल्न सक्नुपर्छ ।’ उहाँ आफ्नो विचार र सिर्जनाप्रति असाध्यै विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो । त्यो विश्वास नै उहाँको जीवनको वास्तविक ऊर्जा र शक्ति थियो । तर, विडम्बना भन्नुपर्छ, जीवनको पछिल्लो कालमा त्यो विश्वासले उहाँलाई साथ दिएन । विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक पदमा पदोन्नति नभईकनै सेवानिवृत्त हुनुपर्दा उहाँको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको थियो । त्योबेला उहाँले आफ्ना लागि आफूभित्र आफैंले जगाएर राखेको आत्मविश्वासको आगोलाई उपयोग गरी त्यो ठेसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन । जीवनमा अनपेक्षित रूपमा आइलागेको त्यो धक्कालाई उहाँले धकेल्न सक्नुभएन । भन्नेहरूले भने— त्यही घटनाले वानीरा दिदीलाई डिप्रेसनमा लग्यो । र, अन्ततः उहाँ जीवनमा अल्जाइमरजस्तो घातक रोगको सिकार हुनुभयो । तर, म भन्छु, नियतिले उहाँको जीवनमाथि खेलेको क्रूर खेल थियो त्यो । नियतिका अगाडि कसको पो के लाग्छ !
वानीरा दिदीको भौतिक अवसानका लागि नियतिले कस्तो कु–क्षणको योजना गरेको रहेछ ! मृत्यु ज्यादै सस्तो भएको कोरोनाकालमा कोरोना संक्रमित भएर वानीरा दिदीले मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । दिदीको अन्तिम बिदाइ ज्यादै खल्लो हुन पुग्यो । उहाँको भौतिक अवसान सामान्य समयमा भएको हुन्थ्यो भने अन्त्येष्टिमा लेखकहरूको ठूलो भीड लाग्ने थियो । र, एउटा स्मरणीय घटनाका रूपमा उहाँको बिदाइ हुनेथियो, तर नियतिले त्यसो हुन दिएन । नियतिको नियत उहाँप्रति कति कठोर !
वर्तमान स्थितिमाथि कवि इन्दिरा प्रसाईले एउटा कविता लेखेकी छन् । ‘अब कहिले नआउनु वानीरा’ शीर्षक कविताको एउटा अंश यस्तो छ :
‘पञ्चेबाजा र सिंदुरे जात्रामा/अन्तिम बिदाइ गरिनुपर्ने
तिम्रो कोमल काया पनि/गड्याम् गड्याम बुट बजार्दे आएका
पीपीईका कठोर हातहरूले/अदृश्य बनायो’
नियतिले वानीरा दिदीलाई असमयमै हामीबाट छिनेर लग्यो । तर, शब्दहरूमा उहाँले आफ्नो अस्तित्वलाई जसरी अजम्बरी बनाउनुभएको छ, त्यसलाई भने नियतिले कदापि छुन सक्दैन । पार्थिव शरीरको अन्त्य भएपनि उहाँले छोडेर जानुभएका कालजयी सिर्जनामा उहाँ जीवित हुनुहुन्छ ! अनन्त कालसम्म जीवित रहनुहुनेछ !
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७८ ११:१६
जेष्ठ २२, २०७८ पवित्रा लामा
महाशय !!लालकिल्लाको भव्य प्राचीरबाटजब फहराउनुहुन्छ, तपाईं राष्ट्रको सम्मानअनि उडाइदिनुहुन्छ मुक्त आकाशमादर्जनौं सेता परेवात्यो उभिएकी हुन्छे सधैं निक्कै टाढा, पछिल्तिर अनि कुनामा ।
विडम्बना छ महाशय,
जहिले, जब अनि जहाँ त्यो उभिन्छे
त्यसलाई पानी–खेदो गरिबस्छ
गुलामीका माखेसाङ्लाहरुले ।
तपाईं र मभन्दा धेरै–धेरै–धेरै
व्यस्त छ, त्यसको दिनचर्या ।
नाम, धर्म अनि पहिचानभन्दा
धेरै–धेरै–धेरै प्रश्नहरु खोतल्नमा
व्यस्त रहन्छे त्यो ।
हिउँदको कठ्याङ्ग्रिँदो कुनै बिहानीमा
जब तपाईं सयर गर्नुहुन्छ राजपथमा
त्यसअघि नै त्यसको लावारिस देह उठाइसकेको हुन्छ
नगर–निगमका कर्मचारीहरुले ।
त्यसैले हो महाशय यत्तिका दिनमा पनि
त्यसलाई तपाईंले देख्नै भएको छैन ।
खेद प्रकट नगर्नुहोस्
केही कुराहरु जन्मेका हुन्छन्
केवल मर्नकै लागि ।
तपाईंका सुधारवादी नीति होस् अथवा
मेरा इमानदार कविता
कसैले कसैगरी बचाउनै सक्दैनन्
यी भुइँफुट्टा फोहोरी सरिसृपहरुलाई ।
आउनुहोस्, तपाईं अनि म,
आफ्नो विवशताको शोकगीत ।
तपाईं एक दिनका निम्ति हटाइदिनुहोला राजपथबाट
योजनाहरुको राजकीय इस्तहार
एक दिनका लागि म्युट गरिदिनुहोला
च्यानलहरुबाट झूटो समाचार
ट्वीटरको चरालाई छोडिदिनुहोस् एकै दिन खुला आकाशमा
देखाइदिनुहोस् आफ्नो असली अनुहार एकै छिन फेसबुकमा
मचाहिँ यति नै गरूँला
फालिदिउँला अनि हालिदिउँला
आफ्ना साराका सारा लाचार बेकाम्मे कविताहरू
सडक किनारको डस्टबिनमा ।
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७८ ११:३८